ယောက်ျားလေးတွေကြွေဆင်းကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ ? | Buzzy
ယောက်ျားလေးတွေကြွေဆင်းကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ ?
ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကို သူတို့က သဘောကျတတ်လဲဆိုတော့...
အမျိုးသားတွေမှာလည်း သူတို့ဘာသာသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံ၊ ဘယ်လိုပုံစံဆိုသူတို့အကြိုက်ဆိုပြီးရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံစံတွေကို သူတို့ကသဘောကျတတ်လဲဆိုရင်....
စာများများဖတ်တဲ့သူကအသိပညာများတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း အမျိုးသားတွေကစာအုပ်တွေဖတ်လေ့ရှိတဲ့၊ စာပေဗဟုသုတရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုပိုပြီးသဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ စာဖတ်တဲ့သူတွေကပိုပြီးသည်းခံစိတ်ရှည်တတ်တယ်လို့သူတို့သိကြတဲ့အတွက် သူတို့ကိုစိတ်ရှည်သည်းခံမယ့်မိန်းကလေးကိုသာလိုချင်ကြပါတယ်။
ယောက်ျားလေးတွေကစကားရှုပ်တတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုသဘောမကျကြပါဘူး။ သူတို့သဘောကျတာက စကားပြောပွင့်လင်းပြီးသူတို့အပေါ်မှာလည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးပါ။
မာနကြီးတာထက်သူ့ဘာသာတသီးတသန့်နေတတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုလည်းယောက်ျားလေးတွေက သဘောကျတတ်ပြန်ပါသေးတယ်။သူတို့ကိုဂရုမစိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်လေ သူတို့က ပိုသဘောကျလေပါပဲ။
ယောက်ျားလေးတွေက ကလေးဆန်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုသဘောကျတတ်ပါတယ်။ဖြူစင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။သူတို့ကအဲ့လိုမိန်းကလေးတွေရှေ့မှာ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးချင်ကြပါတယ်။
၅။ သူတို့ထက် အသက်ကြီးတဲ့မိန်းကလေး
ယောက်ျားလေးတွေက ကလေးမလေးတွေကိုသဘောကျတတ်သလို မမတွေကိုလည်းရင်ခုန်တတ်ပါသေးတယ်။မမတွေကသူတို့ကိုဆုံးမတာ၊ ထိန်းချုပ်တာကိုလည်းခံချင်တဲ့သူတွေပါ။ပြီးတော့မမတွေကပိုပြီးရင့်ကျက်တော့ သူတို့ကလေးဆန်တာကိုနားလည်ပေးနိုင်တယ်လို့ယူဆထားကြလို့ပါ။
ရုပ်ရည်မချောမောရင်တောင်တခြားသူကိုကူညီတတ်တာ၊တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုစောင့်ရှောက်တတ်တာ၊ လူကြီးသူမတွေကိုကူညီပေးတတ်တာစသဖြင့်အဲ့လိုနူးညံ့တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေကိုလည်းသူတို့က သဘောကျတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမိန်းကလေးတွေက သူတို့အပေါ်မှာလည်း နွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။